I-Apple Park ngoDisemba 2017: ividiyo entsha kujongwa idrone | Iindaba zeGajethi
Ngumsebenzi wobugcisa wokugqibela kaSteve Jobs ongasekhoyo. Ngokuchanekileyo, sithetha iApple Park, eso sakhiwo sitsha sobunzima babo bonke abasebenzi beApple ukuba basebenze kakuhle. Iprojekthi Isebenza ukusukela ngo-2013. Kwaye iinjongo zenkampani yayikukuqala ukuhlala kuyo kwaye zivule iingcango zayo phambi kokuphela kwalo nyaka 2017.
Ngexesha lenkqubo yonke, Umqhubi wenqwelomoya u-Matthew RobertsEbethumela kwisitishi sakhe se-YouTube ukuvela kwale maxiconstrucción kunye nefemi yeCupertino. Kwaye nangona kungakhange kulindelwe ezinye iziqeshana, URoberts wayefuna ukuvalelisa unyaka ngevidiyo yokugqibela apho sinokubona ukuba injani imeko eApple Park kwakule nyanga kaDisemba..
Idrone iqala utyelelo lwayo emoyeni kwaye isivumele ukuba sibone ukuba injani imeko yeApple Campus entsha. Oomatshini bokwakha abasekho ngoku ngeenxa zonke. Siyabona ke ukuba uninzi lotyani oluza kuhamba neApple Park lutyaliwe - siza kubona umfanekiso wokugqibela kwiminyaka embalwa. Ewe kunjalo, kusekho iindawo zokutyala kwaye kulapho abasebenzi bezokwakha basesekhona.
Ngakolunye uhlangothi, UMatthew Roberts ukwasibonisa indawo yokutyela kunye nomhlaba oza kuvulelwa uluntukunye nedama elinamanzi ngaphakathi kwendandatho okanye isiphekepheke. Sikwabona iibhentshi apho abasebenzi baseCupertino banokuchitha ixesha labo lokuphumla beziphumlele kunye neembono. Okokugqibela, ividiyo erekhodwe kunye nedrone ibonisa ukuba kufakwe isithuba sokhuseleko ekufikeleleni kwiCampus ngeWolfe Road.
Sicinga ukuba Kwiiveki ezizayo ukuhanjiswa kwabasebenzi be-Apple abangama-12.000 kuyakwenzeka, phakathi kwe-CEO yangoku (uTim Cook). Kulindelwe ke ukuba kwikota yokuqala ye-2018 iApple Park iya kuba kwindawo epheleleyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Izaziso » I-Apple Park ngoDisemba 2017: ividiyo entsha yokujonga idrone
Ezona zithethi zingabinazingcingo zika-2017